U-Anna Bredava uyiSocial Media Marketing Specialist kwa I-Awario. Ubhala ngokukhangisa kwedijithali, izitayela zemithombo yezokuxhumana, ukumaketha kwamabhizinisi amancane kanye namathuluzi asiza noma ngubani onentshisekelo yokumaketha.
NgoMsombuluko, Ephreli 5, 2021 NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 U-Anna Bredava
NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2018 NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 U-Anna Bredava
Ukuthengiswa kwemithombo yezokuxhumana kungumkhakha omusha wabachwepheshe bezentengiso emhlabeni wonke. Ngokuphikisana nenkolelo ephelelwe yisikhathi, ukuthengiswa kwemidiya yezenhlalo kungaba yinzuzo kunoma yimuphi umkhakha - akunandaba ukuthi izithameli zakho ezihlosiwe ziyizinkulungwane zeminyaka noma isizukulwane X, abafundi basesikoleni noma abaninimabhizinisi abakhulu, abalungisi noma oprofesa basekolishi. Uma ucabanga iqiniso lokuthi kunabasebenzisi abasebenzisa imithombo yezokuxhumana abasebenza cishe ama-3 billion emhlabeni wonke, ungasho ngempela ukuthi abekho abantu abangathanda